Adeegga Internetka oo Ka Go'an Magaalooyinka Waaweyn Ee Dalka Soomaaliya.
Sunday June 25, 2017 - 15:34:06 in Wararka by Super Admin
Waxaa Hawada Ka Maqan adeegga internetka inta badan magaalooyinka waaweyn ee dalka Soomaaliya oo magaalada caasimadda ah kamid tahay
internetka ka go'an Somalia ayaa saameeyay adeegyada Warbaahinta
Xalay saqdii dhexe ayuu go'ay adeegga Internetka oo ay bixiyaan sedax shirkadood oo ay ugu weynyihiin Hormuud iyo Global arrinkaasi oo saameyn ku yeeshay adeegyada bulshada.
Mid kamida Mas'uuliyiinta shirkadaha Internetka bixiya ayaa shabakadda SomaliMeMo u sheegay in sababta Internetka u go'ay ay aheyd adegga Fibre Optic oo la ballaarinayay.
Maqnaashiyaha internetka ayaa saameyn ku yeeshay xawaaladaha, Bankiyada iyo qeybaha kala duwan ee warbaahinta maxalliga ah oo SomaliMeMo ay kamid tahay.
Shabakadda SomaliMeMo oo xarunteedu tahay magaalada Muqdisho ayuu maqnaashiyaha Internetka saameyn ku yeeshay waloow markii dambe xaaladdu caadi kusoo laabatay oo howlwadeenada shabakaddu qaab kale wax ufurdaamiyeen oo shaqada xoogeeda dhanka dibadda u wareegtay.
Howlwadeenada shabakadda SomaliMeMo ee ku sugan Qaaradda Yurub ayaa si KMG ah shaqada usii wada, wariyaasha qaar ee gudaha dalka ku sugan ayay usuurtagashay in ay sawirro kasoo diraan magaalooyinka qaar waloow khadka inernetka ay isticmaalayaan uu yahay mid aad uliita oo waqti badan ay ku qaadanayso in ay sawirro iyo warbixinno soo diraan.
Howlwadeenada SomaliMeMo ee magaalada Nairobi iyo magaalooyin katirsan qaaradda Yurub ayaa hadda dadaal dheeri ah ugu jira sidii ay sawirro uga heli lahaayeen gudaha dalka, insha'allaah waxaan gudbin doonaa sawirradii ugu dambeeyay iyo dhacdooyinka dalka.
Soomaaliya oo kamid ah meelaha sida aadka ah looga faa'iidaysto Tignoolajiyadda casriga ah iyo isgaarsiinta ayaysan muuqan tallaab lagu adkeynayo adeegyadaasi muhiimka ah, inta badan ganacsatada ayaa dalka soo geliya badeecadaha daruuriga caadiga ah waxaana yar tartan dhanka internetka ah oo ganacsatada u dhaxeeya.
Saraakiil Lagu Dilay Magaalooyinka Boosaaso iyo Muqdisho.